नेकपा बिबाद : पद हस्तान्तरण ! एकलौटी रुपमा विपक्षीको भाग खोसेर कब्जा गरेका यी पदहरु – Sanghiya Online
Posted on : February 28, 2021 - No Comment
नेकपाको बिबाद आज आम नेपाली जनताले बुझेकै बिबाद हो। कुनै नयाँ बिषय बस्तु होइन। एउटै बिषय हो पद हस्तान्तरण गर्न नसक्नु। चाहे त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् वा प्रचण्ड – माधव समूह। नेकपा गठन देखि आज सम्म दुवै पक्षले एउटै कुरालाई अगाडी बढाए त्यो हो आ आफ्नो स्वार्थ।
यति स्वार्थमा डुबे नेकपाका नेताहरु कि बिपक्षी दलहरुलाई दिनु पर्ने पद समेत हत्याए । अन्तमा केहि बाकि नभए पछि आ आफ्नो भाग बण्डा नै मिलेन भन्दै पार्टि सम्म फ़ुटाउन पछि परेनन् । ओलीलाई चाहिएको हो आजीवन प्रधानमन्त्रि भने अरु नेताहरु के गरेर बस्ने ? प्रचण्डलाइ प्रधानमन्त्री बन्न हतार भएकै कारण विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। पदमा लोभिएर प्रधानमन्त्री ओलीले यति सम्म गरे कि देखको गणतन्त्र नै सखाप पार्ने गरि संसद बिघटन गरेर प्रधानमन्त्री पदमा बस्न चाहे। आखिरमा यस्तो अवस्था किन आयो त ? नेकपाका नेताहरुको स्वार्थ बढ्दै गयो । प्रधानमन्त्री ओली सहित प्रचण्ड माधव नेपालले एक पछि अर्को पदहरु कब्जा गर्दै गए ।
राष्ट्रपति -उप राष्ट्रपति देखि सभामुख उप सभामुख सबै पदहरु च्यापिन थाले पछि नेकपा लोभले लाप र लापले बिलापमा फसेको हो। केपी ओली लोभी हो भने पदहरु च्याप्ने बेलामा प्रचन्डले सोच्नु पर्दैन कि म पनि त्यहि बारीको मुल भए भनेर l त्यति बेला बिरोध गर्नु पर्थ्यो नि जति बेला नेकपाले राष्ट्रपति पद लियो साथै उप राष्ट्रपति पद पनि हत्यायो l त्यति बेला प्रचण्ड माधवले बोले उपराष्ट्रपति कांग्रेस वा जनता समाजबादी पार्टीलाइ दिउ भनेर । पद भागबण्डा गर्ने बेलामा प्रचण्डको दिमाग कँहा थियो ? प्रचन्डले छोरी ज्वाई र आफ्ना नातागोता गरेर १२ वटा पद दबाएर राखेका छन् । यस अर्थमा प्रचण्ड नै कुन चाँही ओली भन्दा राम्रा हुन् र ? जसको बिरोध प्रधानमन्त्रीले अहिले विभन्न कार्यक्रममा गर्दै आउनु भएको छ । ठिक त्यस्तै केपी ओली जस्तो संकीर्ण बिचार भएको नेताको लागि प्रधानमन्त्री पद नै होइन । जब नेपाल पीएचडि गरेका नेताहरुले बनाउन सकेन भने केपीले नेपाल बनाउछु भन्नु धर्ति बाट तारा खसाल्ने कुरा गर्नु उस्तै हो। अहिले पनि नेकपाले ओगटेर बसेका संबैधानिक पदहरु यस्तो छ :-
राष्ट्रपति — नेकपा
प्रतिनिधि सभा — दुई तिहाइ नेकपा
राष्ट्रिय सभा — दुई तिहाई नेकपा
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष – नेकपा
प्रदेश सभा – ६ वटा नेकपा सरकार
स्थानीय निकाय– झण्डै दुई तिहाई स्थानमा नेकपा
कोरोना भाइरस कहाँबाट पता लाग्यो ? यो के हो ? बच्ने उपाय ? चाइनामा कसरी महामारी भयो ?